Kenya oo ka hadashay tallaabada Somaliya ay xiriirka ugu jartay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Kenya oo ka hadashay tallaabada Somaliya ay xiriirka ugu jartay
Kenya oo ka hadashay tallaabada Somaliya ay xiriirka ugu jartay
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inaanay ka aargudan doonin tallaabadii ay Somaliya xiriirka ugu jartay, taasi bedelkeedana ay xalka ku raadin doonto xal diblomaasiyadeed.
Afhayeenka Dowladda Kenya, Cyrus Oguna ayaa sheegay inaanay Kenya qaadi doonin mid lamida ficilkii ay Somaliya sameysay, haddii kalana loo arki doono mid aargudasho ah.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in xal u helidda xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal, ay uga dambeen doonaan IGAD iyo COMESA.
“Waxaan nahay ummad sareysa, ma samayn karno wax lamid ah wixii ay Somaliya sameysay. Haddaan sidaa yeelno waxay u muuqaneysaa aargudasho, waxaan u ogolaan doonnaa inay arrintan la wareegaan IGAD iyo COMESA.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa iyana sheegtay inaanay weli Somaliya ka helin war rasmi ah, oo sheegaya in ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay.
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe ayaa saqdii dhexe ee xalay ku dhawaaqay in Xukuumadda Muqdisho ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay Xukuumadda Nairobi.
“Dowladda Federaalka Somaliya iyadoo ka duuleysa madaxbannaanideeda qaran, ee uu damaanad qaadayo xeerka iyo qaynuunka caalamiga ah, gudaneysana waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta midnimada, qaranimada iyo xasiloonida dalka waxaa ay go’aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto Dowladda Kenya.” Ayuu yiri Wasiirka oo ka soo muuqday Telefishinka Qaranka.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in Somaliya ay ku wargelineyso diblomaasiyiinta ka joogga dalka Kenya in ay dalka ku soo laabtaan, halka kuwii Kenyana ay ogeysiineyso in ay dalka uga baxaan toddobo cisho oo ka bilaabaneysa 15-ka bishan.
Wasiir Dubbe oo ka hadlayay sababta xiriirka loogu jaray Kenya ayaa yiri “Dowladda Federaalka waxay u gaartay go’aankan, si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan, ee is daba-joogga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay Dowladda Kenya ku heysay madaxbanaanida dalkeena.”
Somaliya ayaa 29-kii bishii hore ee November u yeeratay Safiirkii Kenya u joogay, Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, halka Safiirkii Kenya ee dalka u fadhiyay-na, Amb. Lucas Tumbo lagu wargeliyay in dalkiisa uu wadatashi ugu laabto.
Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ahaa mid aad u xun.
Previous articleGalmudug oo dabacsanaan u muujisay Ra’iisal Wasaare Rooble
Next articleKenya iyo Somaliland oo maanta heshiis kala saxiixday